APICMO inopa mutengesi wemishonga inoshandiswa maitiro uye contract neR & D.
APICMO ikambani yemishonga inonyanya kugadziriswa pakati pevanhu vanokosha pakati pekutsvakurudza kutsva nekugadzirwa kwehutachiona, kupa urongwa hwekugadzira, kushandiswa kwemaitiro, kubudisa mashoma nemamwe mabasa ekutsvakurudza mishonga nekukudziridza masangano nemakambani ekurapa; APICMO mune makemikari, biologically yakagadzirwa nemishonga inopindirana, APIs uye mari. Kuvandudzwa kwemakemikari, kutaridzika kwehutano, kugadzira cGMP, kutungamira kweprojekti, uye kutengeswa zvine simba rakanyanya.
APICMO ine simba rakadzika R & D uye masayendisiti anoziva - Dr. Zeng zhaosen. Isu tine chikwata chikuru chekugadzira uye sangano rekutungamira kwebhizimisi. Vatungamiri veboka re APICMO vanowanzobva kunyika dzakabudirira dzakadai seUnited States, Europe neJapan. Zvinopfuura makore 10 emabhizimisi mune zvekambani mumakambani emarudzi akawanda emishonga. Pashure pemakore anopfuura gumi ekutengesa kwemakethe, APICMO ine nheyo yakawanda yekubatanidzwa mumishonga inoshandiswa kwemishonga inodhaka.
APICMO inonyanya kukoshesa uye inochengetedza pfuma yevashandi vayo. Mukuwedzera kune APICMO inesimba rekuchengetedza pfuma, APICMO yakagadzira nhoroondo yakanaka pakusangana nezvinodiwa nevatengi vemarudzi munyika. APICMO nheyo dzekambani dzinobva kumakambani maduku ezvinyorwa zvekuchengetedza mishonga kune dzimwe nyika mishonga yekukurapa, kubva kumapurisa ekutsvakurudza kwepasi rose nekugadzirisa masangano, ku laboratories mune zvinyorwa zvekutsvakurudza, kubva kuICH nyika dzakabudirira kuenda kune dzichiri kusimukira seChina neIndia. APICMO mapurojekiti uye mhando yemiti yakagadzirwa kubva ku-pre-clinic kusvika kune zvigadzirwa zvemabhizimisi.
"APICMO iSO 9001: 2008 yakavimbiswa uye mabasa ayo ose emabhizimisi ari kunyatsoteerera nemitemo yenyika yehutano hwehutano."
FUNGA NA APICMO
R & D KUSIMBISA
kupa ruzivo rwekugadzira, kushandiswa kwemaitiro, kubudisa mashoma uye mamwe mabasa ekutsvakurudza nezvemishonga nekukudziridza masangano uye makambani emishonga.
Vatungamiri veboka re APICMO vanowanzobva kunyika dzakabudirira dzakadai seUnited States, Europe neJapan.
APICMO inopawo kugadzirisa kushanda, zvidzidzo zvehutano, zvidzidzo zvoutsvina uye zvidzidzo zvekusimudzira kuti zvigadzirise zvinodiwa nevatengi IND uye NDA.
APICMO inotsvaka kuvandudza zvirongwa uye kuderedza mari yevatengi vedu. Takaisa hutano hwakanaka uye hwakavimbika hwevashandisi vechiChinese muChina kuti vape hutano hwakanaka uye husingabatsiri hwekugadzira uye zvekutenga zvinhu.
Chiito chemuviri wevanhu
APICMO inopa mubayiro API, CMO Company.
ZVIMWE NEMABABHIRATORI MITAMBO
Synthesis uye antitumor basa chekuongorora steroidal sulfuric acid peji sodium uye oxime inobatanidza nebasa rinopikisa.
BASA RAKABHABATATORY RWEGORE
5 yakabatanidzwa marabhu ane 5 masayunivhesiti anozivikanwa muChina. Sichuan University, Ocean University yeChina, Changzhou Yunivhesiti, Hunan University yeScience uye Technology, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences (ICCAS)
Supply Scale: kubva kikilogram kusvika kumazana e kilograms.we vane chekucherechedza boka revanhu vane 10 vanogadzira tsvakurudzo yakawanda yemusika mumarudzi akasiyana-siyana emagetsi pamwe nekutsvakurudza kune vanogona kuve vatengesi veChina, zvigadzirwa zvemiti, nezvimwewo.
APICMO yakazara nevarume vane unyanzvi hunosimbiswa nevanhu
uyo ane hanya nezvakawanda pakuita kuti zviitwe.